निहुरिएर मोबाइल चलाउने बानि छ ? सावधान ! - IAUA
निहुरिएर मोबाइल चलाउने बानि छ ? सावधान !
ramkrishna November 23, 2016	कन्चन डेभलपमेन्टको ५० प्रतिशत हकप्रद स्वीकृतनिहुरिएर मोबाइल चलाउने बानि छ ? सावधान !सानिमा माई हाइड्रोको पाईपलाइनमा -
आजकल मोबाइल फोनको यति बढ्दो रुपमा छ कि हामी जुन सुकै बेला पनि मोबाइल प्रयोग गर्छौ । बिहान उठेदेखि बेलुका ओछ्यानमा गएसम्म, हिड्दा होस् या शौचालय प्रयोग गर्दा, हामी मोबाइल चलाई रहेका हुन्छौ ।
तर यसरी जुनसुकै बेला मोबाइल चलाउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । धेरै मोबाइल चलाउने बानीले बाटोमा हिँड्दा एक–अर्कासँग ठोकिने, आफुले गरी रहेको काम बिर्सने मात्र होईन घाँटी र गर्दनमा नकारात्मक असर पुर्याउने वैज्ञानिकहरुले बताउछन् ।
निहुरिएर मोबाइल चलाउँदा घाँटी र गर्दनमा धेरै भार पर्छ । र्जिकल टेक्नोलोजी इन्टरनेसनलमा प्रकाशित एक जर्नलका अनुसार हामीले मोबाइलमा निहुरेर चलाउँदा हाम्रो गर्दनमा २७ केजी बराबर तौलको असर परिरहेको छ । निहुरेर मोबाइल चलाइराख्नु भनेको हाम्रो घाँटीमा २७ केजी तौल राखेर झुण्डाइरहनु बराबर रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
यस विषयमा अध्धयन गरेका मेरुदण्ड र हाडका सर्जन डाक्टर केनेथ हन्सराज भन्छन्, ‘अहिले स्मार्टफोनका कारण मानिसहरुले लामो समयसम्म मोबाइलमा झुण्डिने गरेका छन् । यसले उनीहरुको घाँटी र ढाडमा समस्या देखिने गरेका छन् ।’ ‘जता गयो त्यहीँ मानिसहरु निहुरेर मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन् । विशेष गरेर यो बानी ‘महामारी’ जस्तै युवाहरुमा देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ।
हामीले मोबाइल फोन चलाउँदा बनाउने घाँटीको कोणले त्यस भागमा अतिरिक्त भार पर्ने उनी बताउँछन् । हाम्रो टाउकोको औसत तौल ५ केजी रहे पनि मोबाइल चलाउँदा बनाइने ६० डिग्रीको कोणले २२ केजी थप भार थप्ने उनले बताए ।‘यसरी हाम्रो गर्दनमा अतिरिक्त भार पर्नाले मासुहरु च्यातिने, हड्डी खिइने र अन्त्यमा अपरेसनसम्म गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छन्,’ हन्सराज भन्छन् ।
यसबाट बच्नका लागि सजिलो उपाय पनि छ । त्यस्तै समय समयमा आफ्नो कुमले कान छुने व्यायाम वा टाउकालाई हातले ठेल्ने र गर्दनलाई ढाड भएकोतिर लाने व्यायाम गर्न उनी सुझाव दिन्छन् ।साथै मोबाइल चलाउँदा निहुरिनु नपर्ने गरी कै आँखा लेभलमा ल्याएर चलाउनु पनि उत्तम हुन्छ ।
Previous Previous post: सुत्ने कोठा कस्तो हुनुपर्छ?
Next Next post: कुन राशिको मानिसले कसरी लक्ष्मीको पूजा गर्ने ?